Hiran State - News: HS:-R/wasaarahii hore ee Soomaliya Farmaajo oo ay dartiis shacab u dhintaan xili
HS:-R/wasaarahii hore ee Soomaliya Farmaajo oo ay dartiis shacab u dhintaan xili
HS:-Magaalada Mogdishu waxaa ka dhacay arin aad u fool xun taasi oo ay dad shacab ah ku waayeen naftooda taasi oo loo aaneynayo siyaasadaha xawaaraha ku socda ee Farmaajo iyo taageerayashiisa.
Dib uguma laabaneyno waxii dhacay markii xilka laga qaaday r/wasaarahii hore ee Soomaaliya Farmaajo iyo sida shirkii loogu magac daray Kampala Acord loola gadiyey siyaaasadii xiligaasi jirtay,laakinse waxaa muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed fahmaan wax badan oo aanu u guur galnay iyo warbixino horudhac ah oo aanu ka helnay dad ka ag dhaw kooxda ololaha u wada Farmaajo.
Inta aanu u guurgalin warbixinta oo dhinacyo badan taabaneysa waxaa muhiim ah in R/wasaarahii hore ee Soomaaliya Farmaajo iyo kooxda ololaha u wada isweydiiyaan intaan oo su'aalood.
1- Maadaama la ogyahay in aysan wadanka ka dhaceyn afti guud oo dadweynaha ay codkooda dhiibanayaan maxey ku dhinteen dadkii iskugu soo baxay Mogdishu xiligii uu booqday halkaas?
2-Maxaa kalifayo In ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed qaab qabiil nabadgalyada u sugaan iyadoo ay dalka wali ka jirto dowlad shaqeyneysa nabadgalyada musharaxiinta kalena ay iyadu sugto wax dhib ahne aan lagu qabin?
3- Marka la eego musharaxiinta faraha badan ee ku nool Mogdishu oo dhamaantood sameyn kara inta ay sameeyeen Farmaajo iyo kooxdiisa maadaama la ogyahay in magaalada Mogdishu hadii aad kun dolar la baxdo in la heli karo 500 qofood oo maalinkaas sacbiya, maxey tahay ujeedada nolosha shacabka qatarta loo galinayo bisha ramadaan maadaama Farmaajo iyo kooxdiisa badankood ay caruurtoodu dibadaha wax ku bartaan?
Su'aalahan oo aanu bulshada Mogdishu qarkood weydiinay, jawaabaha ay ka bixiyeen iyo sida looga badbadinayo ololaha Farmaajo qoraalkeena danbe la soco.
· admin on August 12 2012 05:41:48 · 0 Comments · 1793 Reads ·
14,612,259 unique visits